Windows 10 na ojiji nke oke freespace
Windows 10 na ojiji nke oke freespace 6 ọnwa 1 izu gara aga #1584
Otu n'ime isi okwu na FSX,FSXA bụ ego nke RAM na freespace nwere ike iweghara. Ka mmemme ahụ wee rụọ ọrụ nke ọma enwere obere ihe ị ga - eme iji mee ka mmemme ahụ rụọ ọrụ nke ọma. Nke mbu bu ileba aka na akara ma gosiputa ihe nlere. Buru banye n’ime menu ebulu ma seta peeji nke 5000 iji bido. Windows na-eji ihe edobere ebe a dị ka ebulu. Ọzọ bụ iji ebe nchekwa USB nke GB dị elu ma tọọ ya maka teadyboost. Kpamkpam ya ma ghara iji ya maka nchekwa ọ bụla. Kpọgharia ya Virtual Ram. Ugbu a nzọụkwụ ọzọ bụ otu n'ime nhọrọ kachasị ukwuu maka oghere n'efu ị nwere ike ịnweta. Mee akara aka nri na draịvụ c gị ma gaa nke dị elu, pịgharịa gaa mpịakọta faịlụ na mpempe akwụkwọ na-achọpụta akara ok wdg na ọ ga - abịa na mbido, ma ọ bụrụ na ọ na - ekwu ihe ọ bụla karịa ịga ma ọ bụ jụ pịa ileghara anya. Ọ ga-agarịrị, nke ga-enye gị gig 4 na 5 ọzọ naanị na nke ahụ. M na-eme ihe m Fsx file first then my 86x then my windows files in ma 86, mgbe m kwuru Windows na m na-ekwu maka isi Windows faịlụ, wee laghachi na mmeghe ebe ọ na-egosi usoro ndekọ maka C niile. Ugbu a, mgbe ị na-adụkọta ya, ọ ga-enye gị msg dị ka otu ụbọchị iji mezue, ọ ga-agụ faịlụ niile mgbe ahụ ọ ga-etinye ọnụ, yabụ agwaghị gị, ọ ga-agwụ ngwa ngwa. Enwere ihe na folda na nde anọ karịrị nde anọ na m, ọ were ihe dị ka nkeji iri atọ megidere ịdọ aka ná ntị ọ nyere. Nhọrọ ọzọ bu tupu ịmalite fsx FSXGo ga-acho ụdị% temp% ma hichapụ ihe niile. Faịlụ nke na-agaghị ehichapụ echegbula. Ozugbo i mechara ihe niile i chetara n’otu oge ị na -eme ihe ọ bụla, yabụ wepu ngwa ngwa ihuenyo ahụ ma wepu òké gị mgbe niile,, ọ ga-akpata enwu. Rịba ama ụzọ mkpirisi ọ bụla na - ewepụ ohere efu ma nwee ike ịme nwayọ. Nmalite mmalite bụ ebe ịchọrọ ihe niile. N'okwu ndị ụgbọ elu egosipụtaghị na ọ na-abụkarị otu n'ime ihe abụọ, ọ bụghị fsx, ọ p3 ma ọ bụ na ọ nọghị na faili ziri ezi. Ajuju obula na-ahapuru m ebe a ma obu msgim. Enwere m otu narị ụzọ m ga-esi mee Fsx zuru oke, ọ na-ewe oge. Mgbe FS2020 abịarute, m ka ga-etinye ya na nke a dịka ọ bụ nnukwu ngwa mmụta, yana onye chọrọ ịtụfu ọrụ karịrị afọ iri na abụọ? Echere m na m ga-enye ya ya n'ụlọ ọgwụ Veterans. Semper Fidelis, Afọ Ọhụrụ, na-ahụ gị na Oge Square.
Ndumodu ikpe azu: site StonewallUSMC. Reason: Misspell
Oge ike page: 0.163 sekọnd